Madaxweynaha oo ka tacsiyeeyay geerida Eng. Maxamed Cumar Saalixi | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Madaxweynaha oo ka tacsiyeeyay geerida Eng. Maxamed Cumar Saalixi
Madaxweynaha oo ka tacsiyeeyay geerida Eng. Maxamed Cumar Saalixi
War qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa ka tacsiyeeyay geerida Allaha u naxariistee Eng. Maxamed Cumar Saalixi oo kamid ahaa dadkii dadaalka badan ku bixiyay difaaca dalka Soomaaliya gaar ahaan badda Kenya ay muranka gelisay.
Qoraalka madaxweynaha ayaa u qornaa sida:
Previous articleTaliban oo dagaal kula jirto mucaarad hubeysan oo ka jira Afghanistan
Next articleSoomaali oo dil iyo dhaawacyo loogu geystay Canada